Global Ecommerce: otomatiki vs Muchina vs Vanhu Shanduro Yemunharaunda | Martech Zone
Kuyambuka muganho ecommerce kuri kuwedzera. Kunyangwe makore mana apfuura, a Nielsen mushumo akataura kuti 57% yevatengi vaive vatenga kubva kumutengesi wekunze kwenyika mumwedzi mitanhatu yapfuura. Mumwedzi ichangopfuura iyo COVID-6 yepasirese yakave nesimba rakakura pakutengesa pasi rese.
Kutenga zvidhinha nedhaka kwakaderera zvakanyanya muUS neUK, nekuderera kwemusika wese wevatengesi muUS gore rino unotarisirwa kuve wakapetwa kaviri pane zvakasangana nedambudziko rezvemari makore gumi apfuura. Panguva imwecheteyo, takaona kuwedzera kukuru mucross-muganho e-commerce. RetailX inofungidzirwa kuyambuka muganho e-commerce muEU kwakakura ne30% gore rino. MuUS, data kubva Global-e yakawanikwa kuti yekutengeserana kwepasi rese yakanga yakura nezvikamu makumi mana nezviviri kubva muna Chivabvu gore rino.
Kwese kupi yako yekutengesa marangi yakavakirwa pasheni yekutengesa inogona kunge iri tambo. Hazvishamise kuti vatengesi pasirese vari kutsvaga kutora chikamu ichi chiri kuramba chichiwedzera chebhizinesi nyowani. Nekudaro, kuti vabate zvinobudirira vatengi vanoyambuka-pamuganhu vashambadzi vanofanirwa kuenda zvinopfuura kungopa saiti shanduro kamwechete apo mushanyi achigara panzvimbo yavo.
Ecommerce vanopa vanofanirwa kusanganisira nzvimbo mumazano avo ekukura. Izvi zvinoreva kufunga nezvezvinhu zvakaita semutauro wemuno SEO, uchipa mifananidzo inoenderana nemusika wemuno - kana iwe uri mutengesi weEuropean ari kuyedza kutengesa kumusika weAsia, uchingoshandisa zvifananidzo zveyuro-centric pane yako saiti zvinodzinga yako anogona mutengi.
Kugadziriswa kwenzvimbo kuri kuve nechokwadi chekuti saiti yako iri kufunga nezve ese mameseji enharaunda enzvimbo dzauri kuyedza kutengesa.
Izvi zvinogona kuita kunge basa risingabviri. Nzvimbo zhinji dzekutengesa dzine mazana emapeji akagadziriswa nguva zhinji uye kushandisa vashanduri vane hunyanzvi kunodhura zvisingaite. Panguva imwecheteyo, vazhinji vanogona kufunga nezvekushandurwa kwemuchina uye kwenzvimbo kunge zvinoratidzika uye zvisina kukodzera kuvimba nazvo. Asi sekuziva kunoita munhu anoshandisa mushanduri wekushandura muchina, tekinoroji iri kuwedzera nguva dzese. Tekinoroji inogona kuve chishandiso chakakosha kusimba kwewebhu webhusaiti, uye kana ichibatana nevanhu chaivo, inogona kusvika kumusoro kunoshamisa.
Otomatiki vs Shanduro yeMuchina
Pfungwa isina kujairika ndeyekuti otomatiki shanduro chinhu chimwe chete ne shanduro yemuchina. Maererano ne Globalization uye Localization Chiremera (GALA):
Mashini Shanduro - yakazara otomatiki software inogona kududzira zvinyorwa zvemukati mumitauro yakanangwa. Matekinoroji ekushandura muchina anosanganisira vanopa seGoogle Dudziro, Yandex Dudziro, Mushanduri weMicrosoft, DeepL, nezvimwewo. Asi vatapi vekushandura muchina vakashandiswa kune webhusaiti kazhinji vanongofukidza mitauro yemuno kana mushanyi ava panzvimbo iyi.
Shanduro yeOxpatic - Shanduro otomatiki inopindirana neshanduro yemuchina asi inopfuura. Uchishandisa mhinduro yeshanduro haisi kungobata nekushandurwa kwemukati mako chete asi zvakare kugadzirisa nekugadzirisa zvemukati, iyo SEO yepeji rese rakashandurwa, uyezve inobata kutsikiswa kweizvozvo zvemukati otomatiki, zvinogona kurarama pasina iwe kusimudza munwe. Kune vatengesi, zvakabuditswa kubva mukushandisa kweiyi tekinoroji zvinogona kusimudzira kutengesa kwepasi rose uye zvinoshamisa mutengo-unoshanda.
Vanhu vs Shanduro yeMuchina
Imwe yemakakatanwa makuru ekushandisa mushanduri mushanduro mukuita kwenzvimbo ndeyechokwadi. Vazhinji vatengesi vanonzwa kuzere kushandurwa kwevanhu ndiyo chete nzira yakavimbika yekumberi. Mutengo weizvi, zvakadaro, wakakura uye unorambidza kune vazhinji vatengesi - tisingataure kuti haina hanya nekuti izvo zvakashandurwa zvemukati zvichazonyatsoratidzwa sei.
Shanduro yemuchina inogona kukuchengetedza nguva yakawanda uye kunyatsoenderana nemitauro miviri yakasarudzwa uye nekugadzirwa uye kugona maturusi edudziro ndeevamwe vaviri. Asi taura, seballpark inofungidzira kuti dudziro yacho yakanaka makumi masere muzana yenguva, zvese zvaunoda kuti uwane muturikiri anehunyanzvi kuti aone uye agadzirise shanduro nenzira kwayo. Nekutora yekutanga dura rekushandura muchina urikukurumidzira maitiro ekugadzira yako webhusaiti mitauro yakawanda.
Kubva pamaonero emari, iyi sarudzo ndeye huru yekufungisisa yekuita. Kana iwe uchihaya muturikiri ane hunyanzvi kuti atange kubva pakutanga uye ushande pamazana emapeji ewebhu, bhiri rauchakwidza rinogona kunge riri redenga. Asi kana iwe kutanga neiyo yekutanga dura rekushandura muchina wobva waunza vashanduri vevanhu kuti vagadzirise pazvinenge zvichidikanwa (kana pamwe timu yako inotaura mitauro yakawanda) zvese basa ravo uye mutengo wese uchadzikiswa zvakanyanya.
Nzvimbo yewebhusaiti inogona kuita kunge chirongwa chinotyisa, asi inobatwa nemazvo nekubatanidzwa kwetekinoroji uye vanhu simba harisi rakakura basa sekufunga kwako. Kuyambuka muganho ecommerce inoda kuve zano revashambadzi kuenda kumberi. Nielsen anoshuma izvozvo 70% yevatengesi iyo yakanga yabhadharira kuyambuka-muganho e-commerce yaive neinobatsira nekuedza kwavo. Chero kupi zvako kwekushandisirwa munzvimbo inofanirwa kuve kunobatsira kana kukaitwa zvinobudirira netekinoroji uye miganho yehunyanzvi mupfungwa
Tags: otomatiki shanduroDeepLkutengeserana kwepasireseecommerce yepasi rosemutauro kushanduranzvimbolocalizationshanduro yemuchinamanyorerwo emutauro wemanyorero
Augustin ndiye mubatanidzwa we weglot, mhinduro yemitauro yakawanda yemawebhusaiti. Yakagadzirwa muna 2016 - Weglot yakavakwa kuti dudziro yewebhusaiti ikurumidze, yakapusa, uye chiriporipocho. Aine nhoroondo yezvemari, Augustin akatamira munyika yeSawaS kunotsvaga mhinduro inobatsira makambani kuburitsa kukura kwenyika.